Ejipta: Nandrava Tamboho sy Nanaisotra ny Sainan’ny Ambasady Isiraeliana ny Mpanao Fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Septambra 2011 9:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Italiano, বাংলা, Shqip, 繁體中文, 简体中文, English
Eo an-kianjan'i Tahrir, ivom-besatry ny revolisiona Ejipsiana ao afovoan-tanànan'i Kairo, androany [zoma] ny mpanao fihetsiketsehana an'arivony ho fanoherana ny fitondrana miaramila ao Ejipta. Vetivety monja dia tanoralahy maro no nihaodihaody tany amin'ny Ambasady Isiraeliana izay nandravan-dry zareo ny tamboho fiarovana ny Ambasady, sy nanesoran-dry zareo ny saina Isiraeliana rehefa nanatona ny alina. Indro ny sombotsombin'ny zavanisy voatatitra ao amin'ny Twitter.
Fanindroany tao anatin'ny iray volana izay no nananika ny rihana 15n'ny Ambasady ny mpanao fihetsiketsehana ary nanala ny saina Isiraeliana. Ny Tatitra no nilaza fa efatra ny mpanao fihetsiketsehana nananika ny trano androany.
Ora dimy lasa izay dia nitatitra tahaka izao ny solontenan'ny Al Jazeera Sherine Tadros :
Mizotra ho any amin'ny Ambasady Isiraeliana izay nisy nilaza fa misy mpanao fihetsiketsehana mandrava ny tamboho any
Mahmoud Abu Sharkh mizara amintsika ity sary mampiseho ny mpanao fihetsiketsehana eo amin'ny ambasady isiraeliana mandrava ny tamboho fiarovana
Ora iray taty aoriana dia nanamarika izy:
Mihofahofa eo an-tampon'ny tamboho potika manoloana ny Ambasady Isiraeliana ny saina Palestianiana. #egypt
Ary ora roa izay dia nampiany hoe:
Olona an-jatony mizotra mankany amin'ny Ambasady Isiraeliana. Mitabataba sy mihiaka ny olona manerana ny arabe
Minitra vitsy taoriana, nisioka i Tadros :
Nesorin'ny mpanao fihetsiketsehana hiala ny trano itoeran'ny Ambasady Isiraeliana ny saina Isiraeliana
@SalmaSaid: Nalatsaka taty aminay ny saina Isiraeliana
Lobna Darwish mizara ity sary ity ao amin'ny Twitter ahitana lehilahy ejipsiana mitondra ny takelabin'ny Ambasadin'Isiraely
Tahaka ny fety ny eto. Ny saina [Arabo?] mihofahofa avy eny amin'ny mpanao fihetsiketsehana eny an-davarangan'ny Ambasady Isiraeliana, afomanga sy ny rehetra
Mananihany Raafat [ar]:
@Raafatology: Tokony ho kokombra no ahofahofan'ny ambasady isiraeliana amin'ny manaraka mba tsy ho may isan'andro tahaka izao ny sainany.
Tsy mitsinjatsinjaka tahaka izany ny hafa ao amin'ny Twitter.
Nisioka i Gigi Ibrahim:
Resaka matotra fa tsy misy antony ijanonana ato amin'ny Ambasady Isiraeliana androany alina intsony, vitanay daholo ny rehetra: Niala ny rindrina sy ny saina, efa saiky ato anatin'ny ambasady avokoa ny olona, may ny trakitera.
Ary nanampy i Dina Salah avy ao Kairo:
Tsy maintsy miteny hoe tsy ho gaga raha entina hananganan'ny mpandraharaha Arabo ny rindrin'ny Ambasady Isiraeliana indray ny hetra naloako rahampitso maraina
Mbola mitohy ny raharaha.
Nitatitra i Gigi:
Aparitaka avy eny an-davarangana amin'ny efitra ambanin'ny Ambasady Isiraeliana. Mifandrombaka ny taratasy ny olona rehefa manakaiky azy ireo. Mampikakakaka
Nampian'i Hisham Al Miraat:
Nilaza ny solontenan'ny Al Jazeera fa tsy ny Ambasady Isiraeliana no nasaritaka fa efitrano ambany nampiasaina ho fitahirizana antontan-taratasin'ny Ambasady. Mbola mijoro ny polisy
Nanamarika i Omar:
Valiny: Ambasady Isiraeliana ao Kairo. Hasehon'ny SCAF any andrenivohitry ny firenena Tandrefana rehetra ny lahatsary hanamarinany ny fifehezany ny sehatra politika.
Ary nanazava ny Tonia mpikarakara ny gazetiboky Foreign Policy Blake Hounshell :
Ilay sahotaka tao amin'ny ambasady Isiraeliana no hampangidy [hoditra] ny Revolisiona Ejipsiana eo anatrehan'ny olona maro